Warranty - Beijing Zohonice Beauty Equipment Co., Ltd.
1. Serivisy fikojakojana
(1) Antoka: miaraka amin'ny 1 taona hatramin'ny andro nividiananao ny vokatra, raha misy lesoka dia hanome serivisy fikojakojana maimaimpoana izahay.
(2) Raha manana olana ianao amin'ny fampiasana ny vokatray dia mifandraisa aminay amin'ny telefaona, Fax, Skype, WhatsApp, Viber na mailaka ary hamaly ao anatin'ny adiny iray izahay ary hamaha ny olanao faran'izay haingana.
(3) Izahay dia mandray an-tanana ny kalitaon'ny vokarantsika amin'ny fampiasana mahazatra. Raha misy toerana misy anao mpampiantrano dia manome fikolokoloana maimaimpoana izahay. Aorian'ny fe-potoana fiantohana dia ny vidin'ny kojakoja fotsiny no ampandoavinay. Maimaimpoana mandritra ny androm-piainana ny torolàlana ara-teknika.
(1) Fiofanana ara-teknika:
Hisy ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa na horonan-tsary izay manampy anao hianatra ilay milina, ny fomba fametrahana, ny fomba fampiasana, ny fikojakojana ny masinina, ankoatr'izay dia hisy ekipa serivisy aorian'ny fivarotana manome serivisy an-tserasera 24 ora.
(2) Fiofanana amin'ny klinika:
Ny ivontoerana fanofanana hatsaran-tarehy Zohonice dia natsangana ho an'ny mpanjifa mitsidika. Azonao atao ny mahazo ny torolàlana momba ny fiofanana momba ny klinika avy amin'ny Dokotera na mpanao hatsaran-tarehy, azonao atao koa ny mandray an'io fampiofanana io amin'ny alàlan'ny mailaka, telefaona ary fitaovana an-tserasera sns.